ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး. ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး. ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ ထုပ်လုပ်ခြင်း၊ရေးသားခြင်းများဖွံ့ဖြိုးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကိ ..
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ ထုပ်လုပ်ခြင်း၊ရေးသားခြင်းများဖွံ့ဖြိုးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကို ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း တွင် ရင်းမြစ်ကုဒ်များ ရေးသားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ပြင် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် သုတေသနပြုခြင်း၊အသစ်အသစ်များ တိုးတက်စေခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခြားအချက်များစွာပါဝင်သည်။ဆော့ဖ်ဝဲများ ဖွံ့ဖြိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံရှိနိုင်သော်လည်း အဓိကအချက် ရပ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းရန်၊အလားအလာကောင်းသော လေ့လာနေဆဲ အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များရရှိနိုင်စေရန်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသုံးပြုရန်တို့အတွက် ဖြစ်သည်။
ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရန် ချဉ်းကပ်နည်းများစွာရှိသော်လည်း အင်ဂျင်နီယာနှင့်သက်ဆိုင်သောမူကိုအခြေခံထားသောပုံစံများသည် စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော အဖြများရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။အချို့ကမူ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ကြသည်။အချို့ နည်းနာများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော အောက်ပါအခြေအနေများ ကို ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရန် စုစည်းထားသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲအခြေခံထားသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းသို့စီစဉ်မှု ဖန်တီးရန်
စီးပွားရေးပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များကို စုစည်းရန်
အထက်ပါအချက်များသည် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု လှည့်လည်ပုံ software development lifecycle, orSDLC ကိုညွှန်းဆိုသည်။
Wikipedia: ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး